को-रोना बाट आ`त्तिएका मानिसहरुले बल्ल बुझे आर्युेवेदिक औषधिको महत्व, आर्युवेदिनक औषधी किन्नेकाे भिड लाग्दै ! – Sapana Sanjal
June 12, 2021 147
Sapana Sanjalको-रोना बाट आ`त्तिएका मानिसहरुले बल्ल बुझे आर्युेवेदिक औषधिको महत्व, आर्युवेदिनक औषधी किन्नेकाे भिड लाग्दै ! गलकोट अस्पतालभन्दा पहिला सञ्चालनमा आएका आयुर्वेद औषधालय को-रोना आउनुभन्दा पहिला प्रायः सुनसान अवस्थामा थिए । आयुर्वेद औषधालयमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी फुर्सदिला हुन्थे । पछिल्लो एक वर्षयता देखिएको को- रोना भाइरसले आयुर्वेद औषधिको महत्व उल्लेख्य बढाएको छ । अहिले आयुर्वेद औषधालयका स्वास्थ्यकर्मीसमेत व्यस्त देखिन थालेका छन् ।
को-रोना जितेका अधिकांशले बेसार, गु-र्जो, असुरोलगायतको सेवनका कारण को-रोना जितेको अनुभव सुनाउँछन् । सक्रिय सङ्क्रमित सङ्क्रमणको बखत बेसार र गु-र्जो पानी नखाने कमै भेटिएका छन् । को-रोनाको हालसम्म कुनै औषधि नबनेका कारण को-रोना जित्न सहयोगीका रूपमा आयुर्वेद औषधिको प्रयोग गर्ने क्रम उल्लेख्य बढेको धवलागिरि आयुर्वेद औषधालयले जनाएको छ । कार्यालयले यस क्रममै सङ्क्रमितको हातहातमा आयुर्वेद औषधि पु-याउने अभियान चलाइरहेको छ ।
को-रोना सङ्क्रमितलाई अनलाइनमार्फत योगाभ्यास गराउनेदेखि रोग प्रतिरोधात्मक औषधि वितरणसम्मको काम औषधालयले गर्दै आएको धवलागिरि आयुर्वेद औषधालय बागलुङका प्रमुख डा। सरोज रायले बताउनुभयो । “सङ्क्रमितले आफूखुशीसमेत आयुर्वेद औषधि सेवन गरेको पाइएको छ तर फोनबाटै भए पनि सल्लाह गरेर खाँदा राम्रो हुन्छ, गु-र्जो, बेसार, अदुवालगायतका औषधिको समेत मात्र मिलाएर खान आवश्यक हुन्छ, हामीले बारम्बार आइसोलेशन तथा होमआइसोलेशनमा गएर भन्दै र परामर्श गर्दै आयुर्वेदको महत्व दर्शाएका छौँ”, डा। रायले भन्नुभयो, “अहिले कार्यालयबाट समेत दैनिक २० देखि ३० जनाभन्दा बढीले हामीले को-रोना जित्न सहयोग गर्र्न बनाएको औषधि प्रयोगका लागि लैजानुभएको छ भने करिब २१२ को-रोना सङ्क्रमितलाई कार्यालयले पालिकासँग समन्वय गरेर औषधि वितरण गरेको छ ।”
को-रोनाको पहिलो लहरपछि निरन्तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिको माग भएको र अहिलेसम्म ७५४ जनाले उक्त औषधि लगेको औषधालयको भनाइ छ । को-रोनाले आयुर्वेद औषधिप्रतिको भरोसासमेत बढाउँदै लगेको र लोपोन्मुख जडीबुटीको समेत संरक्षणमा टेवा पु-याउने उहाँको भनाइ छ । गु-र्जो गुमनामजस्तै थियो तर को-रोनामा एकाएक चर्चामा आयो अहिले कतिपय स्थानमा गु-र्जो खेती समेत गर्दै आएको पाइएको छ ।
को-रोना सङ्क्रमित भई होमआइसोलेशन तथा आइसोलेशनमा बसेकाले कुनै न कुनै हिसाबले आयुर्वेद औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ सेवन गरेको डा। रायको दाबी छ । नेपालका पाँचौँ को-रोना सङ्क्रमित बागलुङकी अंशु सापकोटा र छैटौँ सङ्क्रमित मनकुमारी पौडेलले समेत आत्मबल र आयुर्वेद औषधिको सहारामा को-राना जितेको बताउनुभएको थियो । होम आइसोलेशनमा बसेर को-रोना जित्नुभएका पत्रकार नारायण रिजाल, स्थानीय दुर्गा सुवेदीलगायतले होमआइसोलेशनमा बस्दा गु-र्जो, टिमुर, बेसारपानी, पुदिना, बोझो, दालचिनीजस्ता आयुर्वेद औषधिको प्रयोग गरेको बताउनुहुन्छ ।
सङ्क्रमित बिरामीलाई लक्षणअनुसारको आयुर्वेदिक औषधि, आहार-विहार र योग तथा मनोसामाजिक परामर्श दिएर उपचार गरिरहेको औषधालयले जनाउँदै आएको छ । औषधालयको सेवा नपुगेको बरेङ गाउँपालिका, काठेखोला, ताराखोला, बडिगाड गाउँपालिकामा समेत नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, पालिकाको स्वास्थ्य शाखा र अस्थायी को-भिड अस्पतालमार्फत औषधि पठाई सेवा दिइरहेको छ । औषधालयले उत्पादन गरेको ‘आयुर क्वाथ’, ‘गु-र्जो, जेष्ठवासादी, याष्टीमधु मिश्रण’, अश्वगन्धा, गुडुची अमालाकी चुर्णलगायतका सङ्क्रमणबाट बच्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण गर्दै आएको छ । धवलागिरि आयुर्वेद औषधालयले उत्पादन गर्दै आएको ‘आयुर क्वाथ’, ‘गु-र्जो, जेष्ठवासादी, याष्टीमधु मिश्रण’को प्रयोग निकै बढी गरिएको छ ।
उक्त औषधिले को-रोना लाग्नबाट जोगाउने, को-रोना लागेमा जित्न मद्दत गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने तथा को-रोना पछिको रुघाखोकी, छातीको दुखाइसमेत कम गर्दै लैजाने डा राय बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार को-रोना सङ्क्रमणको अवस्थामा आयुर्वेद औषधिसँगै दैनिक ४५ मिनेट योगाभ्यास गर्नुपर्नेछ । सङ्क्रमितले स्वास्थकर्मीको परामर्शमा औषधि खाँदा अन्य असर नगर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । गु-र्जोले सुगर र प्रेसर घटाउने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्रै आयुर्वेद औषधि खान डा। रायको सुझाव छ । काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।